Akụkọ - Gini bu ihe di iche na etiti polis na abuo
Ndị na-anya ụgbọ ala
Ndị na-eme Polish abụọ
Ndị Polish Rotary
DA Ikwado efere
Efere nkwado Rotary
Amfụfụ polishing pad
Ajị anụ polishing pad
Car nkọwa Ngwa
Akpa Ngwá Ọrụ
Mgbapụta ụfụfụ Sprayers
Igwe ụfụfụ Snow
Akpalite raygba karama
Gịnị bụ ihe dị iche na abụọ edinam polisher na rotary polisher
Gịnị bụ ihe dị iche na abụọ edinam polisher na rotary polisher?
A bịa n ’ịhọrọ igwe na-ehicha igwe, otu n’ime ajụjụ ndị ahịa anyị na-ajụkarị bụ:“ Gịnị bụ ihe dị iche n ’ime polis na-arụ ọrụ abuo na onye na-eme ya?” Ọ bụ ezigbo ajụjụ na ndị na-amalite site na polis igwe, azịza ya dị ezigbo mkpa!
Rotary Polisher bụ onye kacha ochie na klaasị ya, tupu ọ pụta site na ọhụụ ọhụụ ọhụụ, naanị anyị nwere ụdị polisher a. Rotis polishers dị nnọọ kwụ ọtọ - isi na-agba naanị otu ụzọ n'agbanyeghị agbanyeghị ịpị ya na agba agba ụgbọ ala gị, ọ ga-aga n'ihu na-agba na ọsọ ahọpụtara. Ọ na-atụgharịkwa na oke mbugharị oge niile, na -emepụta ọnya na-eme ihe ike mana na-ewepụta okpomọkụ. Polisher rotary ga-achọ ka ị nwekwuo ahụmịhe, ị ga-eji aka gị bugharịa polisher ahụ yana ịchọrọ ịma etu ị ga-esi kpụgharịa igwe gafee agba. Polisher na-agbanwe agbanwe na-eme ihe ike karịa, yabụ ọ ga-agbazi ọkọcha miri emi na agba ezughị oke, naanị ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi.
Polishị Dual Action (ma ọ bụ DA Polisher dịka ọ na-adịkarị mkpụmkpụ) bụ okike mgbanwe. Ọ na - atụgharị na ụzọ abụọ dị iche iche: isi na - atụgharị uche na ihe dị okirikiri na spindle nke na - atụgharịkwa na ngagharị na - agbasawanye, yabụ na - ekesa okpomọkụ ahụ na mpaghara ka ukwuu, na - egbochi ikpo oke ọkụ na esemokwu, na - eme ka ọ dị nchebe n'ụgbọala gị. N'ihi ya, ị ga-enwe ike ịhapụ polisher a ka ọ na-atụgharị n'otu ebe ma gbochie ya ịgba agba gị. Nke a na - eme ka DA bụrụ nhọrọ zuru oke maka onye na - amu amu na-achọ idobe ụgbọ ala ahụ na - achọ 'isi elu' mana na-enweghị nchekasị nke ịghasa ọzọ!
21lọ 2107, Iwuli 12, Xincheng Injoy Plaza, No.77, Aixihu North Road, Gaoxin District, Nanchang City, Jiangxi Province, China